आजबाट खुलेको बुद्धभुमि नेपालको आईपीओको बित्तिय अवस्था हेर्नुहाेस् यस्ताे छ
बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजबाट सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले ८ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो। यस अनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ८ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्नेछ।
कस्तो छ रेटिङ्ग ?
कम्पनीको रजिष्ट्रार कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३, पानी पोखरी महाराजगञ्जमा रहेको छ । कम्पनीको आयोजना स्थल, जलविद्युत उत्पादन केन्द्र तथा अन्य भौतिक पुर्वाधारहरु भने नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाँउपालिकाका (साबिकका समुन्द्रटार, कुन्दरादेवी, बालकुमारी र थाप्रेक गा.वि.स. मा रहेको छ।
कम्पनीले ४.९९३ मेगावाट क्षमताको तल्लो ताँदी खोला जलविद्युत आयोजनाको विकास निर्माण गरिरहेको छ। आयोजनाको कुल लागत ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र प्रतिमेगाबाट लागत २३.८ करोड रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ।
कम्पनीले जारी पूँजी ४० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात १२ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता (स्थानिय बासिन्दालाई ४ लाख कित्ता सहित) शेयर निष्काशनमा ल्याएको छ। आईपीओ निष्काशन गरेर संकलन भएको पूँजी आयोजनाको कर्जा आँशिक भुक्तानीमा प्रयोग हुने कम्पनीले जनाएको छ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। स्थानिय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणमा आईपीओ बिक्री गरेपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। कम्पनीको अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी दुबै ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ। आईपीओ निष्काशनपछि कम्पनी शेयर स्वामित्व संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत कायम हुनेछ।